Afhayeenka Galmudug Cabdullaahi Roob da'ay oo lagu xiray Muqdisho - Ceelhuur Online
Home > Uncategorized > Afhayeenka Galmudug Cabdullaahi Roob da’ay oo lagu xiray Muqdisho
Afhayeenka Galmudug Cabdullaahi Roob da’ay oo lagu xiray Muqdisho
July 2, 2018 July 2, 2018 admin523
Sida ay inoo xaqiijiyeen ilo xog-ogaal waxaa magaalada Muqdisho lagu xiray Afhayeenka Dowlad goboleedka Galmudug Cabdullaahi Xaashi Faarax Roob da’ay. ciidamo ka tirsan Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka ayaa xiray afhayeenka isag oo maraya meel u dhow isgoyska Sayid, waxaana goobjoogayaal inoo xaqiijiyeen in gaari Cabdi bile ah lagu horgooyey gaarigii uu watay, kadibna lagala dagay gaariga, waxaana la saaray Cabdi bilaha isaga oo indha laga xiray.
Saraakiil sare oo ka tirsan NISA oo aan la xariirnay ayaa inoo xaqiijiyey in xarigan uu ka dambeeyo Taliyaha NISA gobolka Banaadir Saadaq Joon, Cabdullaahi Roob da’ay ayaa loo badinayaa in loo xiro fikirkiisa oo marmarka qaar ku soo bandhigo baraha Bulshada.
Taleefankiisa ayaa wali dansan, waxaana xog laga heyn halka lala aaday. Ciidamada NISA ayaa inta badan xira dadka fikirka ku dhaliila dowladda Madaxweyne Farmaajo. waxaana arintana u muuqataa mid lagu caburinayo xoriyadda Hadalka.
Dhanka Madaxda Galmudug ayaan wali ka hadlin arintaan, waxaana laga war dhowrayaa waxa ay ka yiraahdaan Masuulkaan lagu xadgudbay.
Daawo: Afhayeenka Galmudug oo ka hadlay Xarig iyo Jirdil Ciidanka NISA u geysteen
Khayre oo Xalay khudbad ka jeediyay Gobolka Virgina ee Mareykanka
Gudoomiyaha Dhalinayrada Hobyo oo la doortay (Sawirro)
Waa sidee saaka xaalada magaalada Godinlabe?